high frequency bonding heating | induction heating machine manufacturer | induction heating solutions
उच्च आवृत्ति ताप ताप
प्रेरणा सम्बन्धी सम्बन्ध के हो?
ईन्डक्शन बोन्डि bond् बन्धन अड्सेभहरू निको पार्न ईन्डक्शन हीटिंग प्रयोग गर्दछ। ढोका, हुड, फेन्डर, रियरभ्यू मिरर र म्याग्नेट जस्ता कार अवयवहरूको लागि चिपकने र सिलेन्टहरू निको पार्न इन्डक्शन मुख्य विधि हो। प्रेरणले समग्र-बाट-धातु र कार्बन फाइबर-देखि-कार्बन फाइबर जोड्ने चिपचापहरूलाई पनि ठीक गर्दछ। त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका मोटर वाहन बोन्डि are छन्: स्पटबन्डि,,
जो सामिल हुन सामग्रीको सानो क्षेत्रहरू तताउँछ; पूर्ण-रिंग बन्धन, जसले पूर्ण जोड्नीहरू तताउँछ।
DAWEI प्रेरण स्थान बन्धन प्रणाली प्रत्येक प्यानल को लागी सटीक ऊर्जा आदान प्रदान सुनिश्चित गर्दछ। सानो गर्मी प्रभावित क्षेत्रले कुल प्यानल लम्बाइ न्यूनतम गर्दछ। स्ट्याम्प प्यानलको सम्बन्धमा जब क्ल्याम्पिंग आवश्यक पर्दैन, जसले तनाव र विकृति कम गर्दछ। प्रत्येक प्यानल इलेक्ट्रोनिक अनुगमित हुन्छ कि यो सुनिश्चित गर्न कि ऊर्जा इनपुट विचलनहरू सहिष्णुता भित्र छन्। पूर्ण-रिंग बन्धनको साथ, एक-आकारका-
सबै कुंडल स्पेयर कोइला को आवश्यकता को कम गर्दछ।
प्रेरणा अटोमोटिभ उद्योगमा रुचाइएको बन्धन विधि हो। व्यापक रूपमा इस्पात र एल्युमिनियम पाना धातुलाई बंधनको लागि प्रयोग गरिन्छ, प्रेरण बढि नयाँ लाइटवेट कम्पोजिट र कार्बन फाइबर सामग्री बन्धन गर्न नियोजित गरीन्छ। इन्डक्शन इलेक्ट्रोटेक्निकल ईन्डस्ट्रीमा घुमाउरो स्ट्र्यान्ड, ब्रेक जुत्ता र म्याग्नेट बन्धनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यो सेतो सामानको क्षेत्रमा गाईडहरू, रेल, तखता र प्यानलका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
कुन उपकरण उपलब्ध छ?
DAWEI प्रेरण पेशेवर प्रेरण उपचार विशेषज्ञ हो। वास्तवमा, हामीले प्रेरणा स्पट क्युरिंगको आविष्कार गर्‍यौं।
उपकरणहरू हामीले वितरण गर्ने व्यक्तिगत प्रणाली तत्वहरू जस्तै उर्जा स्रोतहरू र कुण्डलहरू, दायरा पूर्ण गर्न र पूर्ण समर्थन गर्दछ।
विभाग सोधिने प्रश्न ट्याग सम्बन्ध, उच्च आवृत्ति ताप ताप, प्रेरणा सम्बन्धी सम्बन्ध, प्रेरणा सम्बन्धी सम्बन्धी जुत्ता, प्रेरणा सम्बन्धी सम्बन्ध प्रक्रिया, आरएफ सम्बन्ध प्रक्रिया